प्रस्ट्याटिन्डि U अन्वेषण
समय: 2019-12-05 दृश्य:
प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्रन्थीको सुजन हो. संक्रमणका साथै अन्य विभिन्न कारणले गर्दा सुजन हुन सक्छ.
⭕️ एक्यूट ब्याक्टेरियल प्रोस्टाटाइटिस:
ब्याक्टेरियाको संक्रमणका कारण, र यो सामान्यतया अचानक सुरु हुन्छ र यसमा फ्लूजस्ता लक्षणहरू हुन सक्छन्. चार प्रकारका प्रोस्टेटाइटिसमध्ये यो सबैभन्दा कम सामान्य कुरा हो.
⭕️दीर्घकालीन ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिस:
प्रोस्टेट ग्रन्थिको ब्याक्टेरियाको संक्रमण दोहोर्याएर वर्णन गरिएको. आक्रमणहरू बीच, लक्षणहरू सानो हुन सक्छन् वा बिरामी को लक्षणबाट मुक्त समेत हुन सक्छन्; तथापि, उपचार गर्न गाह्रो हुन सक्छ.
⭕️जीर्ण प्रोस्टाटाइटिस/क्रोनिक पेल्भिक पिड सिन्ड्रोम:
प्रोस्टेटाइटिसका प्रायजसो केसहरू यस श्रेणीमा पराकाष्ठामा पराकाष्ठा; तथापि, यो सबैभन्दा कम बुझिएको हो. जीर्ण प्रोस्टाटाइटिस/क्रोनिक पेल्भिक दुखाइ सिन्ड्रोमलाई प्रज्वलनकारी वा नर्भिक को रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ, मूत्रमा संक्रमण विरुद्ध लड्ने कोषहरूको उपस्थिति वा अनुपस्थितिमा निर्भर गर्दछ, सेमिन, र प्रोस्टेटिक तरल. अक्सर कुनै खास कारण पत्ता लगाउन सकिँदैन. लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् र जान सक्छन् वा लामो समयसम्म रहन सक्छन्.
⭕️असयम्पटोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाटाइटिस:
यो अवस्था अक्सर बाँझोपन वा प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि काम गर्दा संयोगवश निदान गरिन्छ. यस्तो प्रकारको प्रोस्टाटाइटिस भएका व्यक्तिहरूले लक्षणहरू वा असुविधाको गुनासो गर्दैनन्, तर तिनीहरूमा वीर्य/प्रोस्टेटिक तरल पदार्थमा संक्रमण विरुद्ध लड्ने कोषहरू उपस्थित हुनेछन्.
प्रोस्टेटाइटिससित सम्बन्धित लक्षणहरू प्रोस्टेटाइटिसको मूल कारणअनुसार फरक-फरक हुन सक्छन्. लक्षणहरू बिस्तारै देखा पर्न सक्छन् वा चाँडै देखा पर्न सक्छन्, र ती द्रुत गतिमा सुधार हुन सक्छन् (उपलब्ध कारण र उपचारको आधारमा) वा तिनीहरू केही महिनासम्म रहिरहन सक्छन् र तिनीहरू लेदो रहन सक्छन् (क्रोनिक prostatitis). तीव्र ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिसद्वारा सुरु हुने तीव्रता र गम्भीरता अक्सर सबैभन्दा बढी स्पष्ट हुन्छ.
प्रोस्टेटाइटिस भएका लक्षण र लक्षणहरू निम्न छन्:
✅ पीडादायी, कठिन र/वा बारम्बार पिसाब फेर्नु
✅ पिसाबमा रगत
✅ ग्रोइन दुखाइ, मलाशय दुख्ने, पेट दुख्ने र/वा ढाडको तल्लो भाग दुख्ने
✅ ज्वरो र चिसो
✅ मलयाज र शरीर दुख्छ
✅ मूत्रमार्ग निष्कासन
✅ दुख्दो स्खलन वा यौन अक्षमता
अघिल्लोदुई मिलियन डलर भन्दा बढीको अर्डर
अर्कोस्पेनिश टेक्नोलोजीमा लगानी र व्यापारका अवसरहरू